Darren slut: Biography kanye imbangela yokufa
Darren slut, ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi Shahlavi, kwaba ngumdlali wesiNgisi, umculi bokulwa stuntman. Igama lakhe livela WasePheresiya. Isenzakalo esidume kunazo zonke uhlamvu isikrini Taylor Maylos ka eyakhishwa ngo-2010 i-movie "Ip Man 2".
Umlingisi Indima Darren slut - ngokuyinhloko indima ababi e-movie mayelana karate, njengokuthi "Igazi Moon" futhi "Tai Chi Master 2". Yena izinkanyezi ku Hong Kong TV ewuchungechunge "Tehnoboytsy" namafilimu American "inhlekelele yendalo yonke eseduze," "iqhawe madolonzima": "ULegiyona, Wabaphilayo Dead" futhi inkolo zakudala horror ifilimu "Ungefaniswe Out of Time" umqondisi wathwebula German Olaf Ittenbahom.
Eminyakeni yamuva, Darren uvele enkulu-isabelomali omkhulu wamabhayisikobho ashisa izikhotha ngokuthi "300" futhi "Uma Uzitholele Kusuke" in the project ezimele "The Final Sika" nge Robinom Uilyamsom, kanye nomlingisi futhi stuntman amaningana amafilimu Uwe Boll (kuhlanganise "BloodRayne" futhi " egameni iNkosi: A isiboshwa lokuvimbezela Tale ").
Darren slut wazalwa 5 Agasti, 1972 emkhayeni kwabokufika Iranian edolobheni Stockport kule County IsiZulu saseCheshire. Lapho ngineminyaka engu-7 iminyaka, Darren waqala ukutadisha judo waxhumana wokukwenza amakilasi. Wafuna ngokushesha ngangokunokwenzeka ukufezekisa lokhu impumelelo, ngoba ngemva kokuhlangana amafilimu Bruce Lee futhi Dzheki Chana iphupho main Darren wayedubula ebhekise ku-movie wokulwa. Kamuva, lapho ngineminyaka engu-14, waqala ukusebenza ngo-isikole "Shotokan Karate" ngaphansi kokuqondisa Sensei Dave Morris futhi Orasa Harvi, bese naye waqala ukufundelwa isibhakela, isibhakela sokukhahlela futhi Muay Thai ejimini Master Toddy eManchester.
isipiliyoni professional Okokuqala
Lapho ngineminyaka engu-iminyaka engu-16 slut ubudala Darren waqala ifilimu umsebenzi wakhe ngo-1990, yabakhanga Hong Kong ifilimu umkhiqizi Bey Logan. Okwashiwo Bey Logan ukuba DVD-hlobo ifilimu "Tai Chi Master 2" uthi Darren wachitha isikhathi esiningi e umkhiqizi sika indlu, ukuskena, ukukopisha nokutadisha karate movie kusuka eqoqweni lakhe siqu. Lapho exoxa ne-Persian Mirror Darren slut ngishilo ukuthi Logan wabhala lifilimu ngenxa ezinyakazayo, okwathi ngemva kwalokho baya Malaysia. Nokho, lapho ngifika kwathi imali yokudubula lapho, futhi Logan naye Mark Houton slut wathatha umsebenzi stuntman. kamuva Darren kuhanjiswe ku Hong Kong ukuqhubeka oyibamba yakhe umsebenzi.
Qala wenza umsebenzi
Maphakathi nawo-1990, ngemva kokuthuthela e-Hong Kong ukuze baqhubeke nomsebenzi wabo e ifilimu, Darren slut sibonwe umqondisi odumile isinyathelo nezigcawu umqondisi Yuan Heping ezathatha ukuba indima le omubi, umlingisi ephikisayo Dzheki Vu e ifilimu "INkosi Tai Chi 2 ". Ngaleso sikhathi, Darren ubesebenza njengomshayeli bouncer at nightclub futhi welungu ukuvakasha kosaziwayo ezifana Patrick Stewart futhi Bryus Uillis.
Kwaphela isikhathi eside Darren kwakudingeka ukwazi ukudlala ezigebengu nababulali, nabakhonza enze Stunt namasu. Ngaphezu kwalokho, ngo-1995, wazama isandla sakhe umsebenzi umkhiqizi sika, ngokuba umsizi ukukhiqizwa ku isethi movie "The Zomlilo Angel". Darren sathola ithuba ukusebenza ukukhangisa: kanye edume Dzheki Chanom yena ikhangiswe ubhiya kuvidiyo eyodwa inkampani Taiwanese.
Emva "Umbusi Tai Chi 2" yakhululwa iqashwe e-Hong Kong cinema, CEO kwesizini Amafilimu Ng Siyuen futhi umqondisi Toni Lyun Siu Hung ebone okuthile okuhle esikhathini umlingisi abasha ngemvume kuye kwenzeke lesi sigameko e ilunga US-Hong Kong ifilimu "Bloody inyanga "(1997). Zonke amaphutha namabutho ezingaphezu kuka yakha nesenzo izigcawu slut njengoba villain, futhi khona izinkanyezi ezifana Buyela Umva Deniels futhi Chak Dzheffris, ngakho-ke kubhekwa yakudala lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa phakathi abalandeli karate movie.
Umsebenzi kumafilimu yezinye izinhlobo
Ngasekupheleni kwenkonzo yakhe, Darren slut kabani sithombe hhayi kanye yabonakala izembozo zomagazini, bathuthela uhlobo horror, ukuqala nokubambisana ne yisakhiwo sodumo futhi impikiswano umqondisi-German Olaf Ittenbahom, ogama amafilimu ngokuvamile kungavunyelwe ngenxa unya kakhulu wudlame yabo. Slut inkanyezi futhi iqhaza ekwakhiweni stunts movie "NginguLegiyona Wabaphilayo Dead" futhi "The Shadow Out of Time". okufushane umqondisi Okugcwele sika lezi zithombe kanzima kakhulu ukuthola.
Ngo-2004, Darren izinkanyezi ku-movie "The Final Sika", adalwe abasha filmmaker Omar Naim usitshela izinkinga wokusindisa ubumfihlo emhlabeni esikhathini esizayo.
Slut ukwenza stunts kwamafilimu ezifana "I lwemilando Riddick," "Ebusuku Museum", "300", futhi uye njalo uvele esikrinini kwamaqhaza ezihlekisayo episodic, ezifana indima ubuthongo futhi abakwazi ukulwa unogada e ifilimu "EGameni iNkosi: A History isiboshwa lokuvimbezela, "lapho indawo Ray Liotta ku izigcawu belwa Dzheysonom Stethemom, owayengumqondisi Ching Siu-tung. Lapho exoxa ne-Darren slut, ogama biography wayesenze amaphutha wamvumela ukuba ngokufanelekile kubhekwe inkanyezi okunjengalokho wokuqala wathi wayefuna ukuhamba emuva ukudalwa karate amafilimu ngemuva kokuphela ngokubambisana zabo fighters inkanyezi Mark Dacascos. Ngesikhathi esifanayo ubonakaliswe kwezinye iziwombe "Artificial Intelligence", futhi njengoba inkanyezi isivakashi ochungechungeni "Reaper".
Ngo-2010, slut got a villain omkhulu Taylor "Twister" Maylosa movie "Ip Man 2" Ifaka Donnie Yen, Sammo Hung Lynn Hung futhi Huan Syaomin. Nakuba Darren futhi ibonakala kuphela ingxenye movie yesibili, isibhakela sakhe elifana ne Sammo Hung futhi ukuhlulwa yokugcina belwa Donni Yenom iyona zikhathi eyaphumela we ifilimu, futhi uhlamvu slut ukhonza njengomdala villain main. Ngemva kwesikhatjhana, Darren uvele ngaphambi Thriller ngokwengqondo "Red Riding Hood" futhi udlale indima Kano ochungechungeni ithelevishini "Mortal Kombat:. Legacy"
Darren slut Devon abadlale indima Thriller "Ukwenza", eyakhululwa ngo yeshashalazi 2013, lapho ngaphezu Ifaka abalingisi bakhe odumile ezifana Dolph Lundgren futhi Stiv Ostin. Esikhathini ifilimu ka 2013 "Marine: engemuva" Darren udlala Kayzela. Le filimu futhi izinkanyezi Nil Makdonaf futhi inkanyezi WWE Mike "I Miz" I Miz.
Eminyakeni yokugcina yokuphila kumdlali
I last ifilimu slut is wathwebula 2015. "Kickboxer", a Remake odumile isinyathelo movie 1989 ngesihloko esifanayo. Darren ukudlalwa kulesi ifilimu Erika Slouna. Ngaphezu sokudubula wakhe iqhaza MMA fighter Alen Moussi, owayeyisikhulu WWE Superstar Deyv Batista, kanye no-Jean-Klod Van Damme, abadlala indima enkulu ifilimu yokuqala.
Darren slut has udade othile osemusha okuthiwa Elizabeth (owazalwa ngo-October 15, 1986) nomfowabo Robert slut. Februwari 28, 2000 Darren washada kikboksorshe Canadian Lureyne Andershut (owazalwa ngo-Agasti 20, 1978). Lo mbhangqwana waphula ngo-2003, izingane ababenakho.
Darren slut: imbangela yokufa
Nokufa ngokungalindelekile kwesihlobo inkanyezi fighters Darren slut, owayeneminyaka engu-42 kuphela ubudala, ethukile wonke amalungu Hollywood show ibhizinisi.
Lo mlingisi wodumo stuntman wafa Januwari 14, 2015 ekhaya lakhe e-Los Angeles. Isidumbu sakhe sitholakale omakhelwane.
amaphoyisa e-Los Angeles izikhulu akatholakalanga uqambe igama Imbangela yokushona ka Darren futhi kucatshangwa ukuthi babekwazi kubangele ngemva kokudla izidakamizwa ngokweqile noma ezinye izidakamizwa zemithi.
abezindaba abaningi bavele ulwazi kokufa iphutha ukungabekezelelani odokotela umlingisi sika ebekiwe kuye izidakamizwa. Wathi Darren slut, ogama amafilimu babé yokuzinikela, uhlushwa ukulimala ubudala ethangeni, ngakho odokotela ebekiwe kuye buhlungu yokunciphisa entsha. Njengoba izimbangela zokufa umlingisi ngokuthi ukuphendula anobuthi esibangelwa izidakamizwa ukungabekezelelani. Nokho, ngokuvumelana izibalo ezisemthethweni, ukufa kwaba umphumela ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo kubangelwa isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Dzheymi Dornan: Umlingisi Filmography
Bernadette Lafont: Biography nesithombe
Iklabishi Igor: Biography, ukuphila siqu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Ingaphakathi zaseScandinavia. Ingaphakathi zaseScandinavia lendlu izwe
Ingabe uyazi ngezwe lapho ukuthenga pectin?
Imimoya mpilo. Izibuyekezo
I-movie "tass egunyazwe ukumemezela ..": nabalingisi izindima
Jam of zucchini ne apula: iresiphi. Jam wenza kusuka apula zucchini nge multivarka
Jackets Youth zabesilisa - zikanokusho esisebenzayo
"Kungani bengenakuwubulala izicabucabu?" - umbuzo owabuzwa abaningi, kodwa hhayi wonke umuntu uyazi impendulo